“Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy niloa-bava, dia tahaka ny zanak’ondry entina hovonoina.” Isaia 53:7
Avy tao Getsemane ka hatreo amin’ny hazofijaliana.
Avy nivadika tamin’ny Tompony I Jodasy. Alina ny andro, nosamborin’ny miaramila Jesosy. Nofatorany Izy ka nentiny tany amin’I Hana, havan’ny mpisoronabe. Teo no voalohany nikapohana ny tavany. Avy eo tao amin’I Kaiafa, nivory ny mpitari-pivavahana, ary nifandimby niampanga Azy ny vavolombelona mandainga maro. Tsy namaly Jesosy. Nanmeloka Azy ny olona rehetra ary nitaky ny hahafatesany. Nororaina ny tavany. Nokapohina Izy. Nandà Azy intelo I Petera.
Natolotra an’I Pilato, governora romana, Izy, ary tsy nahitany tsiny. Nampanetritena amin’I Heroda Jesosy, ary Heroda naniratsira sy nanebaka Azy tamin’ny nampiakanjoany Azy fitafiana mamirapiratra, dia namerina Azy tamin’I Pilato indray. Niezaka hamotsotra Azy ilay governora, fa tsy nahavita.
Nampitafiana akanjo volomparasy Jesosy, nosatrohana tsilo, ary naseho toy izany ho hitan’ny vahoaka. Niara-niantsoantso izy teo, nitaky ny hanafahana an’I Barabasy, mpamono olona, sy ny hanomboana an’I Jesosy eo amin’ny hazofijaliana. Nasain’I Pilato nokapohina Izy. Nitangorona nanodidina Azy ny miaramila teo an-tokotanin’ny lapa. Nesorina taminy ny akanjo volomparasy, ary natafy Azy indray ny akanjony. Tsy miloa-bava Jesosy. Nentina tany Golgota Izy mba hohomboana amin’ny hazofijaliana.
Io lehilahy antsoina hoe Jesosy io, dia tsy iza fa ilay Zanak’Andriamanitra. Nahoana Izy no tsy nanohitra, na kely aza? Nahoana Izy no tsy nilaza hoe tsy manan-tsiny? – “Kristy … efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondr antsika ho amin’Andriamanitra.” 1 Petera 3:18